गुन्द्रुक खानुका फाइदा के के हुन ? ……जान्नुहोस ! – Khabar PatrikaNp
गुन्द्रुक खानुका फाइदा के के हुन ? ……जान्नुहोस !
July 30, 2020 317
प्रायको भान्सामा नियमित पाक्ने तरकारी पनि हो । गुन्द्रुक स्वादमा निकै चोपिलो हुन्छ । विश्वमा नेपालको चिनारी दिने परिकार हो, गुन्द्रुक । यसाको सेवन प्राय जाडो महिनामा प्रयोग हुन्छ । गुन्द्रुक स्वादका लागि मात्र नभए स्वाथका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।
यो नेपाल लगाएत अरु देसका मानिसहरुलाई पनि निकै मन पर्छ । यसको स्वाद अमिलो हुन्छ । यसलाई सागबाट बनाउन सकिन्छ । सामान्यतया गुन्द्रुकलाई झोलको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । यसलाई अरु पनि स्वादिष्ट परिकारको रुपमा तयार पारि सेवन गर्न सकिन्छ ।
तारे होटलमा गुन्द्रुकको झोलमा भटमास राखेर स्वादिस्ट रुपमा तयार पारिन्छ र यसलाई हिमालय सुपको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । कागती, टिमुर, नुन, खुर्सानी, भुटेको भटमास, धनीया, भुटेको तोरिको तेल राखि गुन्द्रुकलाई साँधेर पनि खान सकिन्छ ।
यसरी तयार पारेको परिकारलाई कोदो, फापरको रोटी वा नेवारी मासको बारासँग खादा पनि निकै स्वादिष्ट हुन्छ । आँखाको भिजनका लागि गुन्द्रुक अति उपयोगी मानिन्छ । यसले आँखा चिलाउने, दुख्ने, सुख्खा हुने समस्यालाई कम गर्दै लैजान्छ ।
ग्याष्ट्रिक र अल्सर भएका बिरामीले पनि सा’दा गुन्द्रुकले फाइदा पुर्‍याउँछ । गुन्द्रुकमा खनिज पदार्थका मात्रा प्रशस्त हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोल घटाउनको लागि भूमिका खेल्छ । अधिक कोलस्ट्रोलको समस्या छ भने पनि त्यसलाई कम गर्नका लागि रायोको गुन्द्रुक सेवन गर्न सकिन्छ ।
Prevमोबाइल तातेर हैरान हुनुन्छ….. ? यि उपाय अपनाउनुस् !
Nextसरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा हिमानी शाहलाई प्रस्ताब …!
२ लाख दिंदा पनि विष्णु माझिको अनुहार हेर्न नपाएका गायक राजन गुरुङ्ग भन्छन्……………
शुक्रबार गर्नुहोस् यी काम, कहिलै हुँदैन् धनको अभाव…..!
कल्पना दहाल ले भावुक हुँदै यस्तो लेखेकी छिन् :आमा बिरामी भइ अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहालाइ छिटै सन्चो होस भनि सबैले भगवान सँग प्रार्थना गरौं ।
दिल्लीका कप्तान श्रेयष एैयरले नेपाली बोलेर सन्दिपलाई खेलाउने संकेत( हेर्नुस भिडियो )
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (31309)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30603)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28359)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25773)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (23632)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (21555)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15954)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15334)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (14071)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13600)
देख्ना साथ फोटोलाई छोएर ॐ कमेन्ट गरी सेयर गर्नुहोस तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ ,ॐ ॐ ॐ !!!
पतिपत्नीले बिहेमा लगाएनन् औंठी,आईफोनको सीमबाट बिवाह बन्धन !
मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उप्रेतीलाई गाडीभित्रै ज’लाउने प्रयास
सिरियल क्विन एकताले किन बिहे गरिनन् ? भाबुक हुदै खुलाइन् यस्तो राज
बौद्धमा आमाछोरी मृत अवस्थामा फेला, श्रीमान भने अचेत